(SAWIRRO) Wasiirka cusub ee dastuurka Puntland oo Garowe lagusoo dhoweeyay. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Wasiirka cusub ee dastuurka Puntland oo Garowe lagusoo dhoweeyay.
Garowe (Puntlandi.com) Wasiirka cusub ee dastuurka, arrimaha federalka iyo dimuqraadiyada ee dowladda Puntland, Cabdifitaax Saciid Caynab ayaa maanta lagusoo dhoweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, isagoo kasoo kicitimay magaalada Muqdisho.
Wasiir Caynab oo ah wasiirka ugu da’da yar xukuumada Puntand ayaa garoonka diyaaradaha ee Kanoko waxaa kusoo dhoweeyay masuuliyiin dowladda katirsan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo u badnaa dhalinyaro aqoonyahano.
Soo dhowaynta kadib, shir jaraa’id oo uu ku qabtay gudaha garoonka ayaa ka mahad celiyay sida balaaran ee loogusoo dhoweeyay Garowe, wuxuuna sheegay inuu aqbalay xilkii loo magacaabay islaarkaana uu la wareegidoono masuuliyaddiisa marka uu barlamaanku ansixiyo.
Qaar kamid ah dadkii soo dhoweeyay wasiirka dastuurka oo u badnaa dhalinyaro, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin booska loo magacaabay wasiir Caynab, iyagoo sheegay inay fursad u tahay dhalinyarada Puntland oo helay wasiir dhalinyaro ah oo u matala xukuumada.